मेयर र उपमेयर दुवै पदमा महिला विजयी…… – Ap Nepal
काठमाडौं, ७ जेठ । कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिकाको मेयरमा नेपाली कांग्रेस र उपमेयरमा नेकपा एमालेका महिला उम्मेदवारहरु विजयी भएका छन् ।मेयरमा नेपाली कांग्रेसकी सुशीला शाही र उपमेयरमा एमालेकी जुना चौधरी विजयी भएका हुन् ।
कांग्रेसकी शाहीले १२ हजार ७१३ मत प्राप्त गरी मेयर पद जित्दा उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी नेकपा एमालेका महादेव बजगाईले १० हजार ४३५ मत मात्रै पाए । उपमेयरमा एमालेकी जुना चौधरी ११ हजार ७८ मत प्राप्त गर्दै विजयी हुँदा उनको निकटतम प्रतिस्पर्धी माओवादी केन्द्रकी जानकीकुमारी सिंहले ८ हजार ३०८ मत पाइन् ।
यो पनी…सुनसरी : सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा शनिबार दिउँसो एउटा अफवा फैलियो, ‘धरानको मेयरमा हर्क साम्पाङ’ विजयी भनेर। यसको ‘ट्रेन्डसेटर’ चाहिँ वैशाख ३० गते राति काठमाडौँको मतगणना सुरु नभई मेयरका उम्मेदवारको मत परिणाम सार्वजनिक गर्ने पात्र रहेछन्।
उनकै फेसबुक पोस्टका आधारमा धेरैले बधाई दिन भ्याए। बधाई दिनेमा केही विशिष्ट व्यक्तिहरु पनि छन्। केही सञ्चारकर्मीको नाम पनि आउँछ। तर, त्यो जित नभएर अफवा मात्रै थियो भनेर स्वतन्त्र उम्मेदवार साम्पाङले केही समय अघि फेसबुकमा पोस्ट गरेर पुष्टि गरेका छन्।
उनले आधिकारिक फेसबुक पेजमार्फत भनेका छन् ‘हर्क साम्पाङ अ रेवोलुसन’मा पोस्ट गर्दै लेखेका छन्, ‘मगतगणना जारी छ ! यसै भन्ने अवस्था छैन ! अहिले नै नै जितको घोषणा नगरिदिनुहुन सबै समर्थक ज्यूहरुलाई हार्किक अनुरोध गर्दछु।’
उनले यो पोष्ट गर्दा धरानमा ४७ हजार ९५ मतगणना सम्पन्न भएको छ। जम्मा ६२ हजार ८९७ मत खसेकोमा १५ हजार ८०२ मत गणना गर्न बाँकी छ। यो समयसम्म धरानमा १६ वटा वडाको अन्तिम मतपरिणाम आइसकेको छ भने वडा नम्बर १५ र १६ को मतगणना जारी छ।
१७ नम्बर वडाको मत ब्यालेट बक्समा नै रहेको छ। ताजा अवस्थामा साम्पाङले १५ हजार ७७ मत ल्याएका छन् भने गठबन्धनको तर्फबाट कांग्रेसका उम्मेदवार किशोर राईले १२ हजार ४१० मत ल्याएका छन्। कांग्रेसका राईभन्दा स्वतन्त्र उम्मेदवार साम्पाङ २६६७ मतान्तर अगाडि छन्। पूर्व उमेयरसमेत रहेकी नेकपा (एमाले)की उम्मेदवार मञ्जु भण्डारी सुवेदी १० हजार ११२ मतका साथ तेस्रो स्थानमा रहेकी छन्।-‘थाहाखबर
Nextदोषीलाई कार्वाही गर्न युवतीको पक्षमा मिस नेपाल साथै आमाहरु सडकमा निस्के हेर्नुहोस (भिडियो सहित)
आमा र हजुरआमालाई टिक-टकमा स्व. किस्मीले यसरी नचाएकी थिइन(भिडियो सहित)
पल शाह प्रकरण पछी दुर्गेश पहिलोपटक मीडियामा, पल शाहबारे गरे यसो भन्दै हात जोडेर माफी माग्दै यसो भने (भिडियो सहित)
आज नेपाल पैसा पठाउँदै हुनुन्छ ? हेर्नुहोस यस्तो छ बिनिमय दर…